Amahlaya aseRiphabhliki yasePrayimari 2016
Amahlaya amahle kakhulu malunga ne-2016 GOP kaPresidential Primaries
• IJob Bush Jokes
• I- Marco Rubio Jokes
• IiJokes zeBen Carson
"Phantse ama-70 ekhulwini lamaMerika athi u-Trump ngameli ubenza 'baxhalabe.' Kwaye ama-30 ekhulwini athi umongameli weTrump uza kuba 'yiCanada.' "- uConan O'Brien
"UDonald Trump wamemezela ukuba akayi kuthatha inxaxheba kwiNgxoxo yeFox News ngomso ebusuku. Abanye abaviwa banelisekile ukubonisa izimvo zabo ngendlela enzulu, kodwa ehloniphekileyo-oko kuthetha ukuba abazange batyelwe ukuba akukho mntu uya kubuka Le." -Jimmy Fallon
"I-Trump ithi akayi kwi-debate ye-Fox News, kuba umongameli uMearn Kelly uyaxolisa kuye." I-Trump inelungelo lokwesaba, kuba ngokuqhelekileyo xa umfazi omncinci, onqwenelayo engavumelani naye, ugqiba ukuthatha isiqingatha sakhe . " -Jimmy Fallon
"E-New Hampshire, umntu waphukela kwikomkhulu likaPoland likaPawulos. -Conan O'Brien
"Abantu abaninzi bacinga ukuba xa intsimi yaseRiphabhlikhi iyicoca iya kuza kuJeb Bush noDonald Trump. Uhlobo olunjengomncintiswano ophakathi kwehlumelo kunye neenwele ezimbi." -Jimmy Fallon
Ingxoxo yomongameli weRiphablikhi ingomso ebusuku, abantu sele beza kumdlalo wokuphuza. Umdlalo owuthandwa kakhulu ngowona apho unqumla ingxoxo kwaye uphume ukusela. " -Conan O'Brien
"Phakathi kwentsasa engomso ebusuku uBen Carson ongu-neurosurgeon.
UCaronon uthi akayikho ukuxubusha, ulapho ukuze ahlolisise kakuhle into ephosakeleyo ngoDonald Trump. "- uConan O'Brien
"Ngendlebe nodliwano-ndlebe izolo, uLindsey Graham waxoxisana nomgaqo-nkqubo wangaphandle waza wathi xa abantu bephelile yimfazwe, cinga, 'Musa ukuvota.' Abalandeli bakaGraham bayaxabisa ukunyaniseka, ngelixa abachasi bakhe bexabisa ukuluma okulumkileyo abangayisebenzisa kwiintengiso zabo. -Jimmy Fallon
"Umphandi ufumene iingoma kwingoma uWoody Guthrie wabhala ngaphezu kweminyaka engama-50 edlulileyo ngoyise kaDonald Trump, uFred Trump.
Ndiyakholwa ukuba yayibizwa, leli lizwe lilizwe lam kwaye eli lizwe lilizwe lam, kwaye eli lizwe liyimhlaba wam. "- UJimmy Fallon
"Ngethuba lentetho ngoLwesihlanu, uSenenja uTed Cruz uthe xa uhamba nomntu uthi 'Joe Biden,' loo mntu uya kutyhola ukuhleka. Yiyiphi enye impendulo oyifumanayo xa uthi 'uMongameli uTed Cruz.' Meyers
"UDonald Trump uye waphuma ngenxa yokuvalwa kwe-Planned Parenthood. Nangona kunjalo, iingcali zithi, ukuba ufuna ngokwenene iPlanned Parenthood ukuba ihambe phantsi kufuneka iguqule ibe yintengiso yeTram." -Conan O'Brien
"Izolo e-Iowa kuphela abaxhasayo babonise ukuba badle isidlo sasemini kunye nomviwa weRiphabliki uRick Santorum. Kuhlala kusisigxina esibi xa isiseko sakho sokuvotela singakwazi ukufikelela kwindawo yokuzonwabisa." -Conan O'Brien
"UDonald Trump uthe ngelokuphela kweveki ukuba isigqibo sakhe nokuba siza kuba ngumongameli siza kwenza abantu abaninzi banolonwabo kakhulu. -Iyi-Meyers
"Uthemba likaMongameli uLindsey Graham, ongatshatanga, uthe namhlanje ukuba ukuba ukhethwe uya kuba 'nomfazi wokuqala ojikelezayo.' Nangona u-creepier, wathi kuTinder. " -Iyi-Meyers
Umqhubi weRiphabhlikhi unomdla wabalinganiswa kunomdlalo weZihlalo zobukhosi. "- UJimmy Kimmel
"I-Senator yaseTexas uTed Cruz yamemezela ngokusemthethweni ukuba usebenzela umongameli.
UCroz uthe emva kokuba enze uphando olunzulu ukuze abone ukuba unelungelo lokwenene lokuphumelela, wathi, 'Ndiya kugijima.' "- UJimmy Fallon
"IRiphabhlikhi uTed Cruz yamemezela ukuba uya kuqhuba umongameli ngo-2016. Ngoko ekugqibeleni, iCarnival ayisona yintambo eyingozi kakhulu eMelika." -Jimmy Fallon
"Ngokwe-imeyile evela kubasebenzi bakhe, uDonald Trump usemiselwe ukuvakalisa ngoJuni 16 ukuba uya kuqhuba umongameli." Ngaloo nto, uDonald Trump echaza ukuba uqhuba umongameli unjengomdlalo weNdebe yeHlabathi yebhola yezemidlalo - kwenzeka njalo kwiminyaka emine. kwaye akukho mntu waseMelika onendaba. " -Jimmy Fallon
"USeninkulu uLindsey Graham umemezele ukuba uqhuba umongameli ngenxa yokuba, uyazi, ufuna abantu abangama-50 babalekele umongameli." -Iyi-Meyers
"Ukuba ukhethwe, uLindsey Graham uya kuba ngumongameli wokuqala okhethwe ngumongameli kwiminyaka eyi-130.
Kwaye uya kuba ngumviwa wokuqala ukuba akhethe iqabane lakhe eliqhelekileyo kwi-rose rose. "- USeth Meyers
"Izolo umongameli kaMongameli uTed Cruz uthe uya kubhalisela u-Obamacare nangona echazwe ngaphambili ukuba ufuna ukuphelisa wonke amagama kuwo. Kuyinto entle ukutyikityha, ngenxa yokuba uVroz wangena esibhedlele kwiimeko ezikhohlisayo." -Jimmy Fallon
"Emva kweminyaka yokutshitshiswa kwe-Obamacare, u-Ted Cruz okhethwe ngumdlalo weti we-Ted Cruz uyayibhalisela. Kwaye ngeveki ezayo uceba ukutshata nomntu ongatshatanga naye kwi-Planned Parenthood." -Conan O'Brien
"Umdlali weqela leeTed Cruz, inkokheli yaseRephabliki yaseTexas, ufuna ukuba ngumongameli. Oko kuthetha ukuba unyathelo elinye elisondeleyo ekubeni ngumhlalutyi weendaba zeFox." -David Letterman
"SinoDonald Trump noTed Cruz kunye noLindsey Graham bonke abajongene nomongameli. Yonke inxalenye yesicwangciso seRiphabhlikhi yokwenza u-Jeb Bush abheke uongameli." -David Letterman
"U- Mitt Romney akayi kuqhuba umongameli." Ngoko uyazi ukuba kuthetha ntoni. Sondela ngakumbi kwaye sondele ngakumbi kuMongameli weTrump. "- UDavid Letterman
"UMitt Romney wamemezela ukuba akasayi kuqwalasela ukusebenza kumongameli ngo-2016. Ngokuchasene nalawa mabhinqa ayekhohliwe ngokusebenza - i-Seattle Seahawks." -Jimmy Fallon
Umlawuli waseNew Jersey uChrist Christie uya kuqalisa ukuxhaswa ngemali ngenjongo yokwenza umongameli we-2016 ngasekupheleni kukaJanuwari. Akukho lizwi malunga nokuba yintoni iqonga lakhe eliza kubakho, kodwa ukuba ndiyazi ukuba uChristoe uya kuba namandla, mhlawumbi yintsimbi ephindwe kabini. " -Jimmy Fallon
"I-poll entsha malunga noonyulo luka-2016 ibonisa ukuba kuphela ama-27 ekhulwini kwabavoti abaya kuxhasa uChris Christie.
Kwaye kuphela iipesenti ezi-4 zezihlalo. "- USeth Meyers
" UDonald Trump uthe ucinga ngokukrakra malunga nephulo lika-2016 lomongameli. -Jimmy Fallon
"U-Jeb Bush uvume ukuba uphefumle inani elibalulekileyo esikolweni esikolweni. Wathi, 'Ukuba ngaba abazali bakho bakubiza ngokuthi' iJeb. '" - uConan O'Brien
"USenin Rand uRaul ubonakalise ukukhankanya kwe-campaign ye-2016 yeMitt Romney kwaye wathi, 'Uhlobo lukaEinstein luchaza, ukuba inkcazo yokunyanzela ukuyenza into efanayo ngokuphindaphindiweyo kwaye silindele umphumo ohlukile.' Xa umntu wathi kuye uEinstein akazange akhulume oko, wathi, 'Ngamagama kaGandhi,' Okubi kwam. '"-Jimmy Fallon
"Emva nje kweentsuku emva kokuba uMitt Romney ucetyise ukuba angase agijime umongameli, kukho ukubuyela emuva. Ukuhamba ngokutsha kuholwa nguJeb Bush, uMike Huckabee, kunye nokuzithengisa ii-bets yakhe yonke into, uMitt Romney." -Conan O'Brien
"UMitt Romney uya kuthiwa adibane neKomiti yeSizwe yaseRiphablikhi ngoLwesihlanu ukuba akhulume malunga nokuhamba komongameli wesithathu. Akunakuba ngumqondiso omhle xa kufuneka uqale intetho yakho ngokuthi 'Ndiphulaphule.'" - USes Meyers
Ummeli weengameli u-Jeb Bush uya kukhupha iindleko zeetyala ezimalunga ezi-10 ukuze aphephe ukuthelekiswa noMitt Romney. Ewe, abafana nanye. -Jimmy Fallon
"Iingqinamba ukuba uChris Christie noMitt Romney baceba ukudibana ukuze banqobe naluphi na ukuphazamiseka okwenyukayo ukhetho luka-2012.
Ngokuqinisekileyo, 'Ukulinganisa ukuThathala' kwakungumgama wekhowudi kaMitt Romney's Secret Service. "- UJimmy Fallon
"UMitt Romney kuthiwa ubuyele ndawonye iqela lakhe lonyulo ngo-2012. Ngandlela-thile, ngokumangalisayo, akukho namnye kubo owayexakeke ngezinto ezithile." -Iyi-Meyers
"UPaul Ryan wachaza ukuba emva kwengcamango eninzi, kwaye uthetha ngeentsapho kunye nabahlobo bakhe, ukuba akayi kugijima umongameli ngo-2016. Ndiyanitshela, lesi simemezelo sathumela amaza okutyhawula." -David Letterman
"I-Jeb yamemezela kwi-intanethi ukuba uhlola umxhelo we-2016 kumongameli. Ukwandisa amathuba akhe, uya kuqhuba nje ngo-'Jeb 'nje. Wathi, 'Igama lam lokugqibela? Akubalulekanga.' "- USeth Meyers
Umzalwana kaYeb Bush u-Neil uthe umama wabo 'uye wajikeleza' kwingcamango yeJeb eqhuba umongameli ngo-2016. Kuba ukuba kukho nantoni na into ethi ufanele ukuba ngumongameli, ngumama wakho uthi, 'Ndicinga ukuba yenze. '"-Jimmy Fallon
"U- Jeb Bush unokugijima kuMongameli." Ubungameli boBushi banjengamafilimu e-Caddyshack. -David Letterman
Amahlaya aseBen Carson
Amahlaya kaAnthony Weiner